पहिला जिन्दगी, पछि राजनीति – Chitwan Post
सुख, दुःख, उन्नति, प्रगति, विकास, विनासजस्ता कुरा पछि आउँछन्, त्योभन्दाअघि जीवन हुन्छ अर्थात् सबैभन्दा पहिला बाँच्ने कुराले प्राथमिकता पाउँछ, पाउनैपर्छ ।
नेपाललाई आज पनि दुनियाँले गरिब देश भन्छन्, होला पनि । आफ्नै उत्पादन कम छ वा भए पनि नभएबराबरको छ । संसारका अरु राष्ट्रले उत्पादन गरेका छन् र ती उत्पादनहरुको उपभोग नेपालका जनताले गरेका छन् । स्वउत्पादन नभएका देशहरु धनी हुन सक्दैनन् यो साँचो हो, त्यही कारण पनि हो आज विश्वले नेपाललाई गरिब देशको लाइनमा सूचीकृत गरेका छन् ।
यतिबेलाको नेपालमा यसो भनिएको छ कि कुखुराको मासु र यसको अण्डामा बाहेक नेपाल अन्य सबै चीजबीजमा अरु देशको भर पर्नु परेको छ । खासगरी, छिमेकी भारत र अर्को छिमेकी देश चीनले उत्पादन गरेको चीजबीचका भरमा हामी नेपाली अडिएका छौँ । यो कुरामा सत्यता पनि छ । वर्ष, दस वर्ष, बीस वा पचासै वर्ष लाग्ला, हामी आफ्नै खुट्टामा टेक्ने हुनेछौँ अर्थात् आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यो त पछिको कुरा भयो ।
आशावादी हुने मान्छेको मूल स्वभाव हो । हामी हाम्रो स्वभावभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ । भविष्यलाई हामी कुर्न तयार छौँ, तर धनी र समृद्धशाली हुने भोलिको कुरालाई छाडेर यतिबेला हामी नेपाली नागरिकहरुलाई बाँच्नकै पिरलो आइलागेको छ । त्यो पिरलो अरु कारणले आइलागेको होइन, रोगको कारण आइलागेको हो र त्यो महामारीको रुप धारण गर्दै गएको रोग हो डेङ्गु ।
कस्तो दुःखद विषय ! उसै त गरिब र ख्याउटे देश त्यसमाथि यो देशका जनतालाई शरीरका विभिन्न अङ्गमा देखिने क्यान्सरले तर्साएको छ । ब्लड क्यान्सर झनै डरलाग्दो किसिमले देखा परेको छ । क्यान्सर रोगको उपचार र औषधि चौपट्टै महँगो छ । परिवारका सदस्यमध्ये कसैलाई क्यान्सर रोग देखा पर्नासाथ बुझ्दा हुन्छ त्यो परिवार अब सुकुमबासी हुनेवाला छ ।
बिरामीको महँगो उपचार गर्दागर्दै परिवार भीख माग्ने अवस्थामा पुग्छ । प्रमाणसहित यो अवस्था सरकारले बुझेपछि क्यान्सर रोग प्रमाणित हुनेबित्तिकै एक लाख रूपैयाँबराबरको ओखतीमुलो निःशु्ल्क गरिदिने सरकारले घोषणा त गरिदियो, तर क्यान्सर लागेपछि एक लाख रूपँैयाँ त छोपै नलाग्ने हुन पुगेको छ । सरकारले क्यान्सर रोगीको उपचारमा बढीमा एक लाख रूपैयाँ सहयोग गरे पनि क्यान्सरपीडित परिवार उपचारमा संलग्न हुनेबित्तिकै एकप्रकारले सुकुमबासी हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, यो साँचो हो । सरकारले यो तरिकाले क्यान्सरपीडितलाई राहत दिएर पनि यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
अस्वस्थ जीवनशैली, अस्वस्थकर खाना र पानीका कारण भनिएको छ कि आज नेपालका जनता यो वा त्यो उमेरका नभनीकनै मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगी भएका छन् । यसो भनिएको छ कि आज यो देशका प्रत्येक घरमा कुनै न कुनै एक जना मधुमेह वा उच्च रक्तचापका रोगी भइसकेका छन् । उच्च रक्तचाप र मधुमेहले यो देशका जनतालाई गाँजिसकेको छ । सुगर र ब्लड प्रेसरका रोगीका लागि ओखती कारखानाहरुलाई ओखती उत्पादन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । नेपालका ओखती उद्योगमा उत्पादन भएका ओखतीले नेपालीको माग धान्न सक्ने कुरै आएन ।
छिमेकी भारत नेपाललाई सुगर र प्रेसरको ओखती बेचेरै धन बटुल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यतिबेला जति नेपाली सुगर र प्रेसरका बिरामी छन् तिनले त जीवनभर ओखती सेवन गर्नुपर्छ, यो साँचो हो तर डरलाग्दो समस्या कहाँनेर देखिन्छ भने यतिबेलाका बालबालिकासमेत भोलिका दिनमा उच्च रक्तचाप र सुगरका बिरामी हुने छेकछन्द देखिन्छ, यो मामुली चिन्ताको विषय होइन । कसैकसैले यस्तो पनि भन्न थालेका छन् कि कतै अब जन्मिने बालबालिका सुगर, प्रेसरको रोग लिएरै जन्मिने त होइनन् ? आजको अवस्थालाई हेर्दा सम्भावना छ भन्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रा अगाडि छ ।
ठ्याक्कै यो कारणले हो भन्न सकिएको छैन, तर नेपाली शरीरका मिर्गौलाहरु रातारात फेल भएर अनगिन्ती बिरामीहरु डायलाइसिस गर्ने र आर्थिक अवस्थालाई थेग्न सक्नेहरु मिर्गौला परिवर्तन गर्नतर्फ लागेको अवस्था छ । मिर्गौला रोगले पनि नेपाललाई ठूलै हैरानी दिएको छ । सामान्य नागरिक त मिर्गौला रोगबाट पीडित भएकै छन्, देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय खड्गप्रसाद ओलीसमेत मिर्गौला रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ र यतिबेला सिंगापुरको कुनै अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि प्रत्यारोपित मिर्गौलाको आयु करिब १० वर्ष हुने बताइएको छ । मान्छे पूरा आयु बाँच्न चाहन्छ । पूरा आयु भनेको कम्तीमा ९० र १०० को आसपास हो । यो कोणबाट व्याख्या गर्दा बाँच्ने चाहनालाई मध्यनजर गर्दा मिर्गौला रोग लाग्नुलाई ठूलै चिन्ताको विषय मान्नुपर्छ, जुन चिन्ता नेपाली घरहरुमा जताततै थपिँदै गएको छ ।
धूलो, धूवाँ र प्रदूषणले नेपालमा आजको आजै मान्छे मरेका त छैनन्, तर यिनकै कारण रोगी भएका भने अवश्य छन् । जन्मिएका बालबालिकाहरु झाडापखाला र निमोनियाका कारण हजारौँको संख्यामा मृत्यु हुने समस्या अर्कोतिर छँदैछ, सर्पले टोकेका बिरामीलाई बचाउन प्रयोग गरिने एन्टीस्नेक भेनमसमेत अन्य देशबाट खरिद गर्न परेको छ, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन । कहिलेकाहीँ समाचार सुनिन्छ– “नेपालका अस्पतालहरुमा एन्टीस्नेक भेनम”को हाहाकार भएको छ । कुकुर, बिराला र जंगली जनावरले टोक्दा लाग्न सक्ने रेबिज रोगको ओखती “एन्टी ¥याबिज भ्याक्सिन”को समेत यो देशमा अभाव हुन्छ । यस्ता ओखतीहरु आजसम्म हाम्रो देशमा बनेको छैन । नेपाली जनताको स्वास्थ्य बचाउने काममा यतिबेलाको सरकारमात्रै होइन, उतिबेलाको सरकारहरु समेत सफल भएका होइनन् ।
प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै रोगका कारण झमेला व्यहोर्दै आएका नेपाली जनता ख्यालख्याल सोच्दासोच्दा यतिबेला डेङ्गु रोगको प्रकोपले त्रसित देखिएका छन् । चितवनको हकमा स्क्रब टाइफससमेत सँगसँगै देखिएको छ, तर ज्यादा तर्साएको भने डेङ्गुले छ । आजसम्म डेङ्गुको उपचारका खातिर कुनै झोल, चक्की वा इन्जेक्सन पत्ता नलागेको अवस्था भए पनि अलिकति पनि हेलचेक्र्याइँ गर्दा ज्यान जान सक्ने बताइएको यो रोग चितवनका सहरबजारमा र गाउँहरुमा देखा पर्न थालिसकेको छ । सरकारीमात्रै होइन, निजी अस्पतालहरु समेत टनाटन डेङ्गुका बिरामीले भरिएका छन् । एकैपटक धेरै बिरामी थुप्रिएपछि समान्य ओखतीको पनि अभाव हुन जाने हुँदा अस्पतालका जिम्मेवार नागरिकहरुमा छटपटी देखिएको छ ।
जिल्ला र नगर तहका स्वास्थ्य संस्थाहरु पछिल्ला दिनमा महानगरपालिका वा उप वा नगर र गाउँपालिकाको जिम्मामा आएका कारण अहिले चितवनको हकमा भरतपुर महानगरपालिका डेङ्गु्बाट जनतालाई बचाउन प्रयासरत देखिएको छ । महानगरप्रमुख रेनु दाहालले डेङ्गु पीरक्षणको लागि कीट अभाव हुन नदिने बताएकी छन् । यतिबेला जनतालाई डेङ्गुबाट जोगाउन महानगर तात्नु स्वाभाविक हो, तर जनप्रतिनिधि वा कुनै एक स्वास्थ्य संस्था वा अन्य केही सामाजिक संघ/संगठनको सक्रियतामात्रै यस्तो खालको महामारीको रुपमा धारण गर्न लागेको रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । यो अवस्थामा डेङ्गु नियन्त्रणका लागि हरेक पेसाका हरेक नागरिकको सक्रियता जरूरी हुन्छ । डेङ्गु संक्रमित लामखुट्टेले टोक्दा यो रोग सर्ने हुँदा यस्ता लामखुट्टेका लार्भाहरु नष्ट गर्न अपनाउन पर्ने सबैखाले उपाय अपनाउन जनताको संगठित सक्रियता आवश्यकता पर्छ । रोग नियन्त्रण गर्न लामखुट्टे र लार्भा नष्ट गर्न जान्नेहरु इमानदारितापूर्वक खट्न जरूरी त छ नै, नजान्नेहरुलाई समेत जान्नेहरुले सिकाउन पर्ने अवस्था यतिबेला देखिन्छ । यतिबेला देखिएको “डेङ्गु” रोगवाला समस्या कुनै एक नागरिक वा एक घरको नभई सिङ्गो देशको समस्याको रुपमा देखा परेको हुँदा जनता मिलेरै यो रोगलाई भगाउन जरूरी छ । सरकार वा सरकारी उच्च निकाय र महानगरपालिकाले मात्रै यो रोग नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था पक्का भएकोले आपतकालीन अवस्था महसुस गर्दै सबै नेपाली जनता एकढिक्का भएर “डेङ्गु”सँग लड्न परेको छ ।
जाने पनि नजाने पनि कसैको समर्थन वा विरोधमा यो देशमा राजनीतिको कुरा गरिन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म । समय खेर फालेर गरिने यो खालको कुराकानीले यो देशलाई कति फाइदा दियो र कति नोक्सान पा¥यो, त्यो हिसाबकिताब गर्ने समय हामीलाई भोलि पनि प्राप्त हुन्छ । कसैको सामान्य प्रगतिमा भित्रभित्रै जल्ने रोग नेपाली नागरिक समाजमा आज पनि छ । यो काम कति ठीक कति बेठीक, यो पनि हिसाब गर्दै गरौँला । यसको लागि पनि हामीलाई समय प्राप्त हुन सक्छ ।
जिन्दगीको लामो समय फाल्तु काम र पूरै फाल्तु कुरामा खेर फालेका हामीलाई त्यस्ता फाल्तु काम र कुराका लागि भोलि पनि समय मिल्न सक्छ, तर यतिबेला डेङ्गुले हामी ठीक काम, ठीक कुरा गर्ने र गलत काम, गलत कुरा गर्नेहरु सबैलाई यदि हेलचेक्र्याइँ गरियो भने सोचेभन्दा पनि ज्यादा दुःख दिनसक्ने अवस्था आएको हुँदा यतिबेला मिलेरै डेङ्गुलाई परास्त गरौँ । जब हामी डेङ्गुलाई पूरै परास्त गर्न सक्षम हुन्छौँ, त्यतिबेला अर्को रोगले नसताउन्जेल फुर्सद मिल्ने हुँदा फाल्तु नै सही, कुरा गरौँला र काम पनि गरौँला । तर, यतिबेला भने अन्य कामकुरा छाडौँ, डेङ्गु परास्त अभियानमा सरिक भइहालौँ । आखिर सत्य त यही हो– पहिलो प्राथमिकता जिन्दगी, पछिल्लो प्राथमिकताचाहिँ राजनीति, धन, पद, रिस, घमण्ड, दान, तीर्थ र व्रत ।